Duulawwan miidiyaalee hawaasaa maaliif? - BBC News Afaan Oromoo
Duulawwan miidiyaalee hawaasaa maaliif?
Dhimmoota adda addaa akka namni qalbeeffatu gochuun barbaachisa. Kanaafi, kan rogeeyyiin miidiyaalee hawaasaa waa'ee dhimmoota adda addaa kaasuun xiyyeeffannaa akka argatan yaalii kan taasisan.
Kanaafis ka'umsa kan nuuf ta'ee ammo duula miidiyaa hawaasaa tibbana 'hidhamtoota sammuu fi siyaasaa yaa yaadannu' jedhuun gaggeefameedha.
Bifawwan leeliftoota garaa garaa
Namoota sochii 'Yeloo muvimanti' bara 2011'tti barsiiftootaafi barattoota Yunivarsitii Finfineetiin hundeessan keessaa Hiliinaa Biraanuu tokko. Hiliinaan barsiiftuu koornaayaa fi Seeraa yoo taatuu, jalqabbii sochiichaa akkasiin yaadatti.
''Miidhaa keessummeessituu ilama daandii qilleensaa Itoophiyaa kan turte Abaraash irratti raawwatamee fi isaan booda mariiwwan midiyaalee adda addaatiin taasifaman, hundeefama sochiichaatiif sababa ta'aniiru.''
Miidhaan saala bu'ureeffatan akkasii wayita raawwatamaniitti hundumtu 'leenca tibba tokkoo' ta'u kan jettu Hiliinaan, isaan booda garuu hundu yoo gara jiruu mataa isaatti deebii'uu miidhaan dubartootaa ni dagatama. Kanaafuu nutis maree walitti fufiinsa qabu fi hubannoo uumuuf yaaduun hojachuu eegallee jetti.
Qindeessituu komunikeeshinii 'seetaawiiti' kan taate Firaa'ool Balaayi sochiin isaanii dhimmoota hawaasa keessatti hinxuqmne ta'an irratti marii uumuun hojachaa jirra jetti.
Mariiwwan walitti fufiinsa akka qabaataniifis tibba ayyaana waggaa qofa osoo hintaane, karoorfachuun dulawwan midiyaalee hawaasaa gaggeessinas jettee jirti.
Leelliftoonni walqixxummaa saalaa kunneenis hawaasichi dhimmi kanarratti waa gochuu qabaata jedhu. Furmaanni rakkinichaa inni duraa dhimmicha irratti ilaalcha walfakkaataa qabaachudha jechuun waan yaadaniif mariiwwan gaggeessu.
Bafiqaadu Haayilu, barreessaa 'Zoon 9' dulawwan walitti fufiinsaa midiyaalee hawaasaa irratti taasisee yaadata.
''Akka mummeetti dhimmoota afur irratti waliitti aansuun duula taasifnee jirra. Isaanis, 'heerri motummaa haa kabajamu, bilisummaan yaada ibsachu hundaaf amma, mirgi walitti qabamuu fi ijaaramuu yaa kabajamu fi waliin abjuu Itoophiyummaa haa abjoonnu,' kan jedhan turan.''
Dulawwan Feesbuukii hundaa yoo gaggeessinu garee ijaaruudhaan, filannoo guyyaatii kaasee hanga qophii suuraa danaa akkasumas barrefammoota duliicha gargaaran sirriitti itti yaaduun turee kan eegallu jedha.
Kanaan addattis sochiileen jijirama hawaasummaa, siyaasaa fi naannoo fiduuf ykn kaka'umsa uumuuf hojatamanis jiru. Dulawwan akkasii keessaa kan haalaan beekamu isaa, 'sagaleen keenya haa dhagahamuu fi kan amma hidhamtoota sammuu haa yaadannu,' jedhuun gaggeefameedha.
Duula dhaadannoo hidhamtoota sammuu haa yaadannu jedhuun torban kana karaa fesbukiitiin eegalamees kanaaf yaada kan maddisiisan obbo Getachoo Shifaraawu. Kaayyoon isaas Hidhamtoota siyaasaa fi sammuu dagataman guyyaa tokkoof yaadachuufi akka haqa argataniif gaafachuudha,'' jedha.
Dhimmoota xiyyeeffannoo dhaban
Biyya keenya keessatti dhimmoonni baayyee barbaachisoo ta'an garuummoo kan dagataman hedduun akka jiran ni dubbatama. Fakkeenyaaf dhimmoota akka farra malaammaltummaa, qulqullina barnootaa, daldala haqa qabeessa ta'ee fi kanneen biroo irratti namoonni hojjechuu malu.
Akka Obbo Geetaachoottimmoo dhimmi hacuuccaa xiinsammuu fi hidhamtoota siyaasaa kan dagatameedha. "Hidhamtoonni sababa gaaffii eenyummaa fi mirga amantaasaanii ilaallatu kaasaniif qofa kutaa dhiphoo tokko keessatti dararaan irra ga'a," jedhan Obbo Geetaachoon.
"Kunimmoo mormii ummataa waggoota lamaan darbaniif naannolee Oromiyaa fi amaaraa keessa ture daranuu hammeesseera. Hidhamtoota kanneen irra dararaan adda addaa irra ga'us, hamma mana murtiitti dhiyaatanii rakkoosaanii hin himaneetti kan isaan dhagawu hin jiru," jedhu Obbo Geetaachoon itti dabaluun.
Kunimmoo, ummanni rakkoosaanirra ga'e dhagayee, ormi isaan miidhaa jirummoo har'as yoo ta'uu baate bor seeratti akka dhiyaataniif, odeeffannoon akkanaa akka hin tatamsaane taasisas jedhaniiru Obbo Geetaachoon.
Kanaafuu duulli torbee kana keessa taasifame, hunduu odeeffannoo waa'ee hidhamtootaa waan qabu akka waliif qoodu, waa'ee warra miidhaa geessisanii fi miidhamanii odeeffannoo wal jijjiiruun kan miidhe akka gaafatamu, miidhamaaf ammoo waanti danda'amu hundi akka godhamuuf kan kaayyeeffateedha jedhan.
Miidiyaa Hawaasummaa jijjiiramaaf
Miidiyaan hawaasummaa dhimmoota koorniyaa fi hidhamtoota siyaasaa dararamaa jiraniif namoonni dubbatan irratti walgahuun yaada isaanii qaaccessani hawaasa biraan ga'uuf akka riqichaatti kan gargaaruudha.
Yaadonni nuti miidiyaa hawaasummaarratti kaasnu qabxii marii akka ta'anii fi hubannoon akka uumamuuf cimsinee hojjenna kan jettu Hilliinaan,yaadonni barreeffaman dhiibbaa sirrii akka argamsiisaniif duula qorannoon deggerame gaggeessuun ni barbaachisa jetti.
Firaa'ool gamasheetiin kaayyoo gooroon keenya hawaasa Feesbuukii gidduutti waltajjii uumuudha jetti.Yoo carroomnemmoo miidiyaa gurguddoon fudhatanii dhimmicha bal'inaan hojjechuun hawaasa biraan ga'uu danda'us jetteetti.
Miidiyaa hawaasummaarratti namoonni dhuunfaa yaadota ka'an garasaaniitti fudhachuun ni tumsu, seenaasaaniis ni qooda, keessummaammoo yeroo baayyee feesbuukii, tuwiitarii fi inistaagiraamii irratti qabxii marii bakka danaasaaniitti fayyadamuun waltajjiin marii akka uumamu haala mijeessu jetteetti.
Egaan miidiyaa hawaasummaarratti kan deggeru qofa osoo hin taane kan yaadaan wal mormus waan jiruuf lamaanirraayyuu waa barachuu qabna jedhu Hilliinaa fi Firaa'ool.
Befiqaaduun gamasaatiin duulli gaggeessine hundinuu bu'a qabeessa turan jechuu nan danda'a jedhe. Duula geggeessineen baayyonni dammaqaniiru, yaadota nuti qoodneefis hedduusaanii fudhataniiru jedha Befiqaaduun..
Keessumaammoo heera mootummaarratti hubannoon akka cimee fi hundaa ol ergaansaanii aanga'oota mootummaa bira akka ga'e amanu rogeeyyiin kunneen.
Obbo Geetaachoonis duula miidiyaa hawaasummaarrati geggeeffamaa jiru kanarraa hirmaannaa namoota hedduu ni eegna jedhan.
Hudhaawwan maal turan
Haala interneetiin rakkisa jiru kana keessatti hirmaattota deebii gaarii argachaa jiraachuu kan dubbatan obbo Geetaachoon duulli miidiyaa hawaasummaa qabbanaa'uu garuu akka hudhaatti kaasu.
Obbo Bafiqaaduun gamasaaniitiin qophaa'ummaa dhabuu, dhaadannoowwan nama hin howwanne dhiyeessuu fi yeroo mariin miidiyaa hawaasummaa gaggeeffamuuf qabame keessatti dhimma biraan qabamuu dhabuu adda baafachuu dhabuu akka hudhaalee ijootti kaasu.
Dhumarrattis duula booda yaadni milkaa'ee fi hin milkaa'in kami jedhanii adda baafachuu dhabuun rakkoo hamaa leellistootaati jedhaniiru. Namoonni yaada duula miidiyaa hawaasaaf dhiyaate akka gaariitti hin ilaalles akka hudhaa tokkootti kaa'amaniiru.
Ta'us garuu miidiyaan hawaasummaa yaadni kamiyyuu ka'ee irratti mari'atamee hubannoon akka uumamu, dhimmoonni dagatamanis xiyyeeffannoo akka argatan kan gargaare ta'uu ni amanu.
Itoophiyaan addunyaatti biyyoota fayyadamtoota interneetii miidhan keessaaa lammaffaa jedhamte
15 Sadaasa 2017
Itoophiyaan intarneetii cufuusheetti doolaara mil. 130 dhabde
29 Fuulbana 2017
'Kan kanaan dura guyyaa alaabaa fakkaataa ture, barana mallattoon 'Fannoo Gooftaa' ta'eera'
'Shanee waliin hariiroo qabda jechuun hojiirraa na hari'an'
Daddaraaroon Oromiyaa eessa jira?
Namoonni sadii waraanamanii lubbuun darbe
Mana hidhaa keessaa hidhamtoonni 75 miliqan
Vaariyasiin haaraan lubbuuf sodaachisu magaalota birootti babal'achaa jira
Haleellaan miisaa'eela Yaman loltoota 80 ajjeesse
Chaayinaan pilaastika takkaaf fayyadanii gataman dhorkuuf